Men ny tuxedos fanaovana kajy habe amin'ny aterineto
Men ny tuxedos habe fanaovana kajy an-tserasera
Men ny tuxedos fanaovana kajy habe amin'ny aterineto dia mamela anao hahita sy ny olona hiova finoana ny tuxedos habe Amerikana, Britanika, Eoropeanina, italianina, rosianina, habe iraisam-pirenena, na ny sakany vata habe amin'ny santimetatra.
Men ny tuxedos habe fanaovana kajy an-tserasera mamela anao mba hampiova finoana ny olona ny tuxedos habe Amerikana, Britanika, Eoropeanina, italianina, rosianina, habe iraisam-pirenena, na ny sakany vata habe amin'ny santimetatra. Ohatra, niova fo tuxedos habeny ny lehilahy avy any Amerikana ho any Eoropa, avy Italiana ny Rosiana na iraisam-pirenena sns koa ianao dia afaka mahita ny olona ny tuxedos habeny tabilao, amin'ny lehibe sy ny kely habeny.
Rosiana Eoropa Amerikana (US / UK) Italiana International Width vata
Men ny ririnina palitao habe fanaovana kajy an-tserasera
Ny olona niova fo ny ririnina palitao habe amin'ny firenena samy hafa, toy ny Amerikana, Eoropeana, italianina, rosianina, habe iraisam-pirenena, na ny sakany haben'ny tratrany.
Ny olona niova fo ny pataloha jeans habeny firenena samy hafa, toy ny Amerikana (US / UK), Italiana, Frantsay, Rosiana, habe iraisam-pirenena, na ny andilany habe amin'ny santimetatra.
Tuxedos ho an'ny lehilahy
Misy lehibe sy kely ny tuxedos olona habe tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.